टेक्नोलोजी आधा जीवन: कुनै बुटस्ट्र्याप छैन
सोमबार, फेब्रुअरी 28, 2011 सोमबार, मार्च 7, 2011 निक कार्टर
म केहि अफवाहहरु हटाउन चाहन्छु। म यसको विपक्षमा छैन उद्यम पूंजीवादी। मलाई लाग्दैन एन्जिल लगानीकर्ताहरू वास्तवमा प्रेतहरू हुन्। मलाई लाग्दैन कि सबैजनाले आफ्नो व्यवसाय सफलतापूर्वक "बुटस्ट्र्याप" गर्नुपर्दछ। यो प्रमाणित गर्न, म तपाईंलाई # १ कारणको बारे बताउन चाहन्छु कि तपाईं र तपाईंको पार्टनरहरूले बेशर्मी भएर आधा बेक्ड व्यापार विचारको लागि कसैलाई पैसा दिन 'अर्ध-जीवन' लाई बढावा दिन सुरु गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
जसरी "स्टार्टअप" शब्द पर्यायवाची भएको छ उद्यम राजधानी, त्यसैले यो "techie" को पर्यायवाची भएको छ। सायद त्यहाँ एक जडान छ। सामान्य सहमति यो छ कि नयाँ स्टार्टअपहरू प्रायः वेब अनुप्रयोग, सामाजिक अनुभव, वा कम्प्युटर हुन् जुन पिनको टाउकोमा फिट हुन्छन्। अब, यो सँधै सत्य हुँदैन। तर, यदि यो थियो भने, तब म मेरो आफ्नै जलाउनु पर्छ पुस्तक र स्वीकार गर्नुहोस् कि प्रत्येक स्टार्टअप (ती कसरी देखिन्छन् [काल्पनिक रूपमा सबै टेक-चालित छन्) उनीहरूले आफ्नो पिचलाई भिसीको लागि पालिस गर्नु र व्यस्त हुनु पर्छ।
टेक्नोलोजी छिटो बढ्ने क्षेत्र हो। म आशा गर्दछु कि कथनले कसैलाई चकित पार्दैन। मूरको कानून हामीलाई बताउँछ कि टेक्नोलोजी प्रत्येक २ बर्षमा डबल्स (जे भए पनि)। तर स्टार्टअपहरूले चासो राख्नु पर्ने गति प्रोसेसरहरू सुधार्ने गति वा रिमको लागत झल्दै गएको होइन। टेक सम्बन्धित स्टार्टअपको बारेमा चिन्तित हुनुपर्ने गति उनीहरूको विचारले यसको नवीनता गुमाउने गति छ। यो एक स्टार्टअपको आधा जीवनको गति हो।
यदि तपाइँ एक उत्पादन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, निराश हुनुहोस्, र तपाइँले यसलाई अझ राम्रोसँग गर्न सक्नुहुने तरिकाको कल्पना गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यहाँ एउटा दर छ जुन तपाइँले निर्धारण गर्नुपर्दछ: मलाई यस उत्पादनको निर्माण गर्न, बजारमा जानको लागि र त्यसपछि निर्माण गर्न कति समय लाग्छ? एक महत्वपूर्ण जन त्यसो भए आफैलाई सोध्नुहोस् कि यदि कसैले त्यस बिन्दुमा ध्यान दिन्छ भने। गम्भीरतापूर्वक! यदि कोहीले ख्याल राख्दछ कि तपाईंले VHS हेड-क्लीनिंगको कला सिद्ध गर्नुभयो भने यदि तपाईंलाई बजार सेयर प्राप्त गर्न एक दशक लाग्यो? एक चोटि नीलो टुथ मुख्य धारामा हिट भयो भने कसैले तपाईंको retractable-तार-हेडसेट को बारे मा ख्याल छ? यी प्रविधिहरू हुन् जुन कुनै प्रतिस्पर्धीले होईन, तर आधा जीवनबाट हराए। मान्छेहरूलाई वोन दिने दौडमा उनीहरू हराए।
जब यो मार्केटिंग टेक्नोलोजीको लागि आउँदछ, मलाई लाग्छ कि म सुरक्षित रूपमा भन्न सक्छु कि "सामाजिक" आजको केही बज् शब्द हो। र सामाजिक आँखा चिम्लेर छिटो छ। सामाजिक परिवर्तनहरू दैनिक। र, "भाइरल" फैलाउने विचारहरूको घटनाहरूको बावजुद, सामाजिक लागत पैसा पनि। सामाजिक स्वतन्त्र छैन। तपाईं केहि धक्का बिना नै सामाजिक घटना सिर्जना गर्ने योजना बनाउन सक्नुहुन्न… जे भए पनि चाँडै हुँदैन। गति, सबै पछि, खेलको नाम हो।
त्यसो भए, कहिले गर्न सक्नुहुन्न बुटस्ट्र्याप यो? यदि तपाइँको उत्पादन एक सामाजिक प्लेटफर्म (ट्विटर वा फेसबुक) मा निर्मित छ कोष प्राप्त। यदि तपाइँको टेक्नोलोजी अर्को टेक्नोलोजीको कमजोरीमा निर्भर गर्दछ (जस्तै हेड क्लीनर वा कर्न्ड ह्यान्ड-फ्री सेटहरू) कोष। यदि तपाइँ कसैलाई तपाइँको विचारको बारेमा बताउन डराउनुहुन्छ (लगानीकर्ता समावेश गरिएको छ) किनभने तपाइँ डराउनुहुन्छ कि तिनीहरूले यसलाई चोरी गर्दछन्, त्यसपछि रकम पाउनेछन्। के अनुमान लगाउँनुहोस्, तपाईले कसैलाई चाँडै वा पछि ग्राहकहरु लाई भन्नु पर्ने हुन्छ, र यदि यो साँच्चिकै राम्रो हो भने अरु कसैले यसको प्रतिलिपि बनाउनेछ र प्रयोग गर्नेछ। VC तपाईंलाई मार्केटमा द्रुत रूपमा पछ्याउन र मार्केट सेयरमा तपाईंलाई विगतको गतीमा पुर्‍याउन। यदि गतिले तपाईलाई हराउन सक्छ भने तपाईसँग गति हुनु पर्छ।